गर्भवती नर्सले संसार छाडिन् अन्तिम अवस्थामा रुदै रेकर्ड गराएको भिडियोले सबैलाई रुवायो (भिडियो सहित) – Hamro24News
गर्भवती नर्सले संसार छाडिन् अन्तिम अवस्थामा रुदै रेकर्ड गराएको भिडियोले सबैलाई रुवायो (भिडियो सहित)
July 14, 2021 adminLeaveaComment on गर्भवती नर्सले संसार छाडिन् अन्तिम अवस्थामा रुदै रेकर्ड गराएको भिडियोले सबैलाई रुवायो (भिडियो सहित)
एक गर्भ`वती महिला जो सन्ता`नलाई जन्मदिन पुरै त|यारी अवस्थामा थिइन् । एक छोरा थिए । श्रीमान र उनी दोस्रो सन्तानको आगमन`को तयारीमा थिए । तर उनीहरुको जिवनमा नसोचेको घटना भयो । भारतमा फैलीएको महा`मारीले गर्भव`ती महिला`ई पनि छोयो। उनी आफै स्वास्थ्य`कर्मी पनि थिइन् । त्यसैले स्वास्थ्यका बारेमा पनि सचेत थिइन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
तर भाइरसले उनला`ई पनि छोयो । लक्षण देखिए`पछि उनी अस्पताल भर्ना भइन् । उनले अस्पताल भर्ना भएपछि एउटा भिडियो बनाइन् । अहिले त्यो भिडि`यो सा`माजिक सञ्जा`लमा निकै भाइरल भएको छ । उनले निकै सन्देश`पूर्ण कुरा रेकर्ड गराएकी छन् । यो भारत`को घटना हो । उनले भनेकी छन्, ‘हेल्लो एभ्रिवान । मैले यो भि`डियो निकै मुस्किलसँग बना`इरहेको छु ।
म तपाईहरु सबैला`ई बताउन चाहन्छु कि कोरोना`लाई हल्का नलिनुस् । निकै खराब लक्षण छ । म राम्रो|सँग बोल्न पनि सकिरहेकी छैन । तर आफ्नो सन्देश सबै समक्ष पुर्याउन चाहन्छु । कृपया बाहिर नि`स्किएका बेला, मानिसहरुसँग कु`राकानी गर्दा, जहिले पनि मास्क लगाउनुस् ।’
यी कुरा दिल्लीकी ती म|हिलाले आफ्नो अन्तिम भिडियो`मा भनेकी हुन् । यी महिलाले कोरोनाको ल डा इँ हारिसकेकी छिन् । तर, आफ्नो अन्तिम भिडि`योमा उनले मानि`सहरुलाई सम्हा`लिएर बस्न आग्रह गरेकी छिन् । उनका पति रविचाव`लाले आफ्नी श्रीमती र नजन्मि`एको शिशुको मृत्यु भएको जानका`रीसहित यो भिडियो सन्देश ट्वीटरमा पोस्ट गरेका छन् ।
यी महिला`को नाम दी`पिका हो । ११ अप्रिलमा उनको को|रोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको थियो । १७ अप्रि|लमा उनले यो भिडियो रेकर्ड गराएकी हुन् । त्य|तिबेला उनको स्वास्थ्य बिग्रँदै थियो । अन्त्य, २६ अप्रि`लमा कोरो`नाबाट हार खाएर संसार छाडिन् । दीपि`का आफ्ना साढे तीन वर्षका छोरा र पतिलाई छा|डेर बिदा भएकी हुन् ।
दीपि`काका पति रविले ९ मेइमा यो भिडियो ट्वी`टरमा शेयर गरेका हुन् । जहाँ उनले लेखेका छन्, ‘उनी पुरै तरिकाले मा`तृत्वका लागि समर्पि|त थिइन् र आफ्नो नजन्मि`एको बच्चा`सँगै स्वर्ग गइन् । र, साढे तीन वर्षका बच्चालाई छाडेर गइन्, ह्याम्पि मदर्स डे दीपिका ।’
यकाबिहानै आयो ड,रलाग्दो खबर यति धेरैले गुमाय ज्या,न…. ।
यी हुन नौ ग्रहलाई शान्त गर्ने उपाय
अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा कसले मार्ला बाजी ? यस्तो छ ईतिहास
प्रचण्डलाई किन बढ्यो खतरा ? उनको सुरक्षामा बढाइयो सुरक्षाकर्मी?
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको लागि आयो यस्तो खुसिको खबर, साउनदेखि लागु भयो यस्तो नियम